Umkhiqizo Imininingwane: Vinyl acetate Monomer
Properties: ketshezi kungekho nto enemibala emihle futhi esobala nge nephunga elimnandi. Flash iphuzu: -8 ℃, ukuminyana: 0.932g / cm3, kancane oncibilikayo emanzini, oncibilikayo kumakhemikhali awuketshezi kakhulu organic, basabela kalula kwalokho chlorine, uxhumano lokudlulisa futhi i-ozone. Ngu isenzo ukushisa nokukhanya, peroxide kanye kulethe, khulula polymerization olukhulu kuyokwenzeka. Isigaba 3 esiyingozi ezinhle, ongaphakeme flash iphuzu ketshezi inflammable (ekuqaleni ekilasini 1 liquid inflammable), ukuqhuma umkhawulo: 2.6 ~ 13.4% (v / v)
Vinyl acetate kuyinto umlamuli esetshenziswa ngokukhiqiza polymers futhi copolymers ezisetshenziswa opende, iphepha ezinengilazi, inhlaka, njll kwenzeka njengoba ketshezi futhi kungekho nto enemibala emihle. Lokhu esiyinhlanganisela umkhulumeli majorly esetshenziswa ngokukhiqiza polyvinyl acetate futhi polyvinyl utshwala. Polyvinyl acetate lithuthukile kunenze nisondelane impahla okuyinto uthole isicelo e ezinengilazi ezimbonini kanye iphepha kuyilapho polyvinyl utshwala kakhulu elisetshenziswa izindwangu, ezinengilazi photosensitive, emaphaketheni, njll
Into iyunithi Ukucaciswa
ukubukeka kungekho nto enemibala emihle esobala
Umbala APHA 5max
Gravity Specific (20 ℃) g / ml 0.930-0.934
Asidi (njengoba acetic acid) ppm 50max
Amanzi ppm 400max
ukungcola Organic ppm 1000max
Ukubila Ibanga (0 ℃, 101.3KPa) ℃ 1.5max
Ubude Aldehyde sokuqukethwe % 0.03max
Iron okuqukethwe Negative
hydroquinone ppm Lapho isicelo iklayenti
Previous: polyvinyl Utshwala
Ilingana Mkhiqizo Of Chang Chun Bp-05
Ilingana Mkhiqizo Of Chang Chun Bp-14
Ilingana Mkhiqizo Of Chang Chun Bp-17
Ilingana Mkhiqizo Of Chang Chun Bp-20h